၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွက် ရန်ကုန်အိမ်ခြံမြေ ရောင်းဝယ်မှု လုပ်ငန်းအပေါ် အခွန်စည်းကြပ်နှုန်းများ သတ်မှတ - Yangon Media Group
၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွက် ရန်ကုန်အိမ်ခြံမြေ ရောင်းဝယ်မှု လုပ်ငန်းအပေါ် အခွန်စည်းကြပ်နှုန်းများ သတ်မှတ
၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်းအပေါ် အခွန်စည်းကြပ် နှုန်းထားများတွင် စံသတ်မှတ်နှုန်းထား အ မြင့်ဆုံးအဖြစ် ပြည်လမ်းနှင့် ကမ္ဘာ အေးဘုရားလမ်းတစ်လျှောက်အားသတ်မှတ်ထားကြောင်းသိရသည်။ ၂ဝ၁၈ စည်းကြပ်နှစ်အတွက် အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်း အပေါ် အခွန်စည်းကြပ်ရန်နှုန်းထားများကို သတ်မှတ်ရာတွင် မြို့နယ်များအား တစ်စတုရန်းပေဖြင့်သတ်မှတ်ပြီး စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်များ၏ ပြည်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်များ၏ ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၏ ပြည်လမ်းနှင့် ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းများပေါ်ရှိ မြေကွက်များကို တစ်စတုရန်းပေလျှင် ကျပ်လေးသိန်းဖြင့် အမြင့်ဆုံး စည်းကြပ်ရန် သတ်မှတ်ထားရှိသည်။
ရန်ကုန်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် ကိုစိုးသူဝင်းက ”ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ကာလတန်ဖိုး စိစစ်သတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရဆို ဒီနှစ်မှာ မရမ်းကုန်း၊ စမ်း ချောင်း၊ လှိုင်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်တွေရဲ့ ပြည်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ် ကမ္ဘာ အေးဘုရားလမ်းရဲ့ တစ်စတုရန်း ပေကို ကျပ်လေးသိန်း အမြင့်ဆုံး စည်းကြပ်ဖို့ သတ်မှတ်ထားတာတွေ့ရတယ်။ မြို့တွင်းမြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့ ပန်းဘဲတန်း၊ ကျောက်တံတား၊ လသာ၊ ပုစွန်တောင်မြို့နယ်တွေမှာ တစ်စတုရန်းပေကို အမြင့်ဆုံး ကျပ် ၂ သိန်း ၇သောင်းကနေ ၁သိန်းကြား သတ်မှတ်ထားတယ်။ ဒီသတ်မှတ်နှုန်းထားတွေက မနှစ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့နှုန်းထားအတိုင်း ပြောင်း လဲမှုသိပ်မရှိပါဘူး။ မနှစ်က အိမ် ခြံမြေရောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်းအပေါ် အခွန်စည်းကြပ်နှုန်းထားတွေကို လျှော့ချသတ်မှတ်ပေးခဲ့တယ်”ဟု ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်က ပြောသည်။
ယမန်နှစ် စည်းကြပ်ကာလအတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်မှု လုပ်ငန်းအ ပေါ် အခွန်စည်းကြပ်နှုန်းထားများကို လျှော့ချပေးခဲ့သဖြင့် အေးစက် နေသောအိမ်ခြံမြေ အရောင်းအ ဝယ်များ ပြန်လည်သွက်လာမည်ဟု အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် မျှော်လင့်ခဲ့သော်လည်း ငှားရမ်းမှုသာများပြားခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် ဝါတွင်းကာလ နီးကပ်လာခြင်းနှင့်အတူ ရန်ကုန် အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်အတွင်း အ ရောင်းအဝယ်ထက် ငှားရမ်းမှုများသာရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မြရည်သီတာ အိမ်ခြံမြေအကျိုး ဆောင်မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ”၂ဝ၁၈ အတွက် အိမ်ခြံမြေရာ ဖြတ် နှုန်းထားတွေ သတ်မှတ်ပေးထားတာက မနှစ်က သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ နှုန်းတွေအတိုင်းဖြစ်လို့ ဈေးကွက်ကို ရိုတ်ခတ်မှု မရှိနိုင်လောက်ပါဘူး။ လက်ရှိမှာ အိမ်ခြံမြေက အ ရောင်းအဝယ်ထက် ငှားရမ်းတာက ပိုအလုပ်ဖြစ်နေတယ်။ အရောင်းအဝယ်ပိုင်း ပြန်သွက်လာဖို့ဆိုတာက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်မှဖြစ်မယ်”ဟု ပြောသည်။
(၂၁)ရာစုပင်လုံ ဆောင်ရွက်ချက်တွင် မျိုးဆက်သစ်များကို ကောင်းမွန်သည့် အမွေမပေးနိုင်ပါက သမိုင?
‘အမုန်းတွေ ခေါက်ထားလိုက်’ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်တွင် စတင်ရုံတင်ပြသမည်
‘ဒါရိုက်တာအလုပ်ကိုရပ်ပြီးတော့ ပရိုဂျူဆာပီပီပြင်ပြင်လုပ်ဖြစ်တဲ့ အချိန်ကျရင်တော့ လူငယ်ေ?
တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ ကိပ်တောင်းမြို့တွင် ၂၄ နာရီအတွင်း လူရှစ်ဦး သေနတ်ပစ်ခံရ